Samsung Galaxy A91 ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub oo video ah | Androidsis
El Samsung Galaxy A91 Waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee aadka loo sugo maanta. Midkani wax badan buu ballan qaadayaa oo, sida ku cad waxa soo daadanayay dhowr toddobaad hadda, ma yara niyad jabi doono.
Midka cusub ee noo yimid asal ahaan waxaa daabacay bogga 91Mobiles. Waxaan ka hadlaynaa a fiidiyow ay ku jirto muujinta 3D ee terminalkal, si dhammaan sharraxaaddeeda looga mahadnaqi karo dhexdeeda si cad. Waxaan hoos ku tuseynaa.
Sida ku cad waxa ka muuqda maaddada hoose, Samsung Galaxy A91, oo leh muuqaal daloolin Infinity-O ah, ayaa umuuqda mid aad ugu eg Galaxy Note 10 xagga hore. Shaashadda taleefanka ayaa fidsan oo umuuqata in lagu dhex daray akhristaha sawirka faraha, hoostiisa, sidaas darteed waxaan ku xaqiijin karnaa maqnaashaha tan gadaasha dambe.
Taleefanka casriga ahi wuxuu ku qalabaysan yahay muraayad muraayad qafiif ah oo ku taal dhabarka, taas oo siinaysa jilitaan aad u fiican oo heer sare ah taabashada. Qalabka kamaradda laba jibaaran ee geeska bidix ee kore wuxuu soo bandhigi karaa qaab kamarad saddex-geesood ah ama afar-gees ah.
Waxaa la yidhi Galaxy A91 ayaa la imaan lahaa Snapdragon 855 ka processor ahaan, sidiisa oo kale Galaxy A90 5G, kaliya kiiskan ma lahan taageero 5G. Waxaa sidoo kale la filayaa inay isticmaasho batari awood leh 4.500 mAh kaas oo sidoo kale taageero u lahaan doona 45 W xawaare degdeg ah.
Tilmaamuhu wuxuu wadaagay laba nooc oo ah muujinta Galaxy A91. Mid ayaa muujinaya taleefanka oo leh saddex kamaradood oo gadaal ah, halka kamaradaha afar geesoodka ah lagu arki karo sawirro kale. Guri afar geesle ah ayaa laga arki karaa labada sawir ee ay kujiraan, taas oo muujineysa in Galaxy A91 lagu qalabeyn doono muraayadaha indhashareerka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Eeg 360 °-bixiyaha fiidiyowga ee Samsung Galaxy A91 oo si buuxda u muujinaya